Rikoooo.com - Canary Islands Scenery fizarana 1 sy 2
Canary Islands Scenery ampahany 1 sy 2
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by janroth » 05 Apr 2017, 16:59
Nalaiko sy nametraka ny Canary Islands Scenery part1 sy 2. Ny fahatsapana voalohany rehefa nanomboka nanidina aho FSX Edition lehibe amin'ny La Palma (GCLA) dia tsara. Tena mahafinaritra scénely !!
Avy eo nanandrana seranam-piaramanidina bebe kokoa aho ary nahita olana vitsivitsy izay tiako hamahana amin'ny fanampianao. Amin'ny làlamben'i Tenerife South (GCTS) dia toa misy olana na fifandonana eo anelanelan'ny toerana sy ny làlambe, satria mipoitra ny faritra sasany amin'ireo tendrombohitra amoron-dàlana ary toa manakana ny lalan-kely ?? Rehefa manao taxi mamaky ny tendrombohitra aho dia miseho miaraka amin'ny karazana singa rehetra eo amboniny ny làlambe sisa ?? Rehefa mijery ny seranam-piaramanidina avy amin'ny rivotra aho dia toa tsy maninona ny zavatra rehetra. Mampalahelo fa ny olana mitovy amin'izany dia mitranga eo amin'ny seranam-piaramanidin'i Los Rodeos (GCXO). Fanamarihana farany iray: ny lalam-by any Gran Canaria (GCLP) dia toa tena fototra. Tsy misy laharana mihazakazaka ary tsy misy dian-kapoka fotsy ankavia sy ankavanan'ny lalamby. Ny runway dia toy ny tsipika mainty ihany. Izany dia kely lavitra noho ny fijery ny sidina voalohany.
Manantena aho fa mazava ny fanazavanako ary manantena aho fa handre torohevitra vitsivitsy hamahana ireo olana ireo.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by janroth » 06 Apr 2017, 14:35
Voafaha olana amin'ny olana amin'ny seranam-piaramanidina GCTS sy GCXO amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fitaovana fanamafisam-peo ORBX Vector Configur amin'ny fampiharana ny fanafoanana ny seranam-piaramanidina avo lenta ho an'ny GCTS sy GCXO. Ny olana sisa tavela dia ny antsipirian'ny mombamomba ny làlan'ny seranam-piaramanidina GCLP. Manantena ny soso-kevitrao momba izany aho.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by janroth » 06 Apr 2017, 15:45
Voavaha ny olana amin'ny fametrahana ny toerana misy ny seranam-piaramanidina Gran Canaria (GCLP) avy any Rikooo. Mahafinaritra ny vokatra !! Misaotra.